सुनको भाउ बढ्यो , तोलाको कती पुग्यो त ? – ramechhapkhabar.com
सुनको भाउ बढ्यो , तोलाको कती पुग्यो त ?
सुनको भाउ तोलामा दुई सय रुपैयाँले बढेको छ । शुक्रबार ८६ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ सोमबारका लागि ८६ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार तेजावी सुनको भाउ प्रतितोला ८६ हजार ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । शुक्रबार तेजावी सुनको प्रतितोला भाउ ८५ हजार ८५० रुपैयाँ थियो । यस्तै चाँदीको भाउ भने तोलामा पाँच रुपैयाँले घटेर कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार प्रतितोला १२ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाउ सोमबार १२ सय २५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
आइपीओ निष्कासनको तयारीमा न्यादी हाइड्रोपावर, कति कित्ता ?
काठमाडौं – न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी आइपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको छ । कम्पनीले ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ५० हजार कित्ता आइपीओ निष्कासनको तयारी गरेको हो । आईपीऋो जारी गर्न कम्पनीले सेबोनमा मंसिर १० गते निवेदन दिएको छ । जसको आइपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ ।
लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–६ बाहुनडाँडामास्थित ङादी खोलामा निर्माणधीन ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाको निमार्ण गरिरहेको छ ।
कम्पनीको जारी पूँजी १ अर्ब ५० करोडको १० प्रतिशतले १५ करोड बरावरको १५ लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि निष्काशन गर्न लागेको छ ।
साथै जारी पूँजीको २ प्रतिशतले हुने मूल्य ३ करोड बराबरको ३ लाख कित्ता संस्थापक शेयरधनी संस्थाका कर्मचारीहरुका लागि र बाँकी १५ प्रतिशत अर्थात २२ करोड ५० लाख बराबरको २२ लाख ५० हजार कित्ता शेयरमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख १२ हजार ५०० कित्ता साधारण शेयर सामूहिक लगानी कोषका लगि रहेको छ ।
त्यस्तै २ प्रतिशत अर्थात ४५ हजार कित्ता साधारण शेयर कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्टाएको गरी जम्मा ४० लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशन हुने बताइएको छ ।